Reysulwasaare Kheyre oo la Kulmay dadkii laga soo celiyay Libya. – Hornafrik Media Network
Reysulwasaare Kheyre oo la Kulmay dadkii laga soo celiyay Libya.
Muqdisho-Hornafrik= Xasan Cali Kheyre Reysulwasaaraha Xukuumada Somalia Ayaa Hoygiisa magaalada Muqdisho ku Qaabilay dadkii ay dowlada Somalia ka soo celisay dalka libya ee ay maxbuus ku ahaayeen.
Waxaa uu la qaatay kulan uu ku xog wareystay dadkaasi oo ay dhalinyaro ku jiraan oo qaarkood dhibaato ka soo gaartay intii ay ku sugnaayeen Dalka Libya.
Maalmo kahor ayay ahayd markii Magaalada Muqdisho Laga soo Dejiyay Qaar kamid ahaa maxaabista Soomaaliyeed ee Dalka Libya.